izimo abahlanu nginyathela izingxenye
Ingxenye nginyathela libhekisela indlela kwakhiwe ngokusebenzisa amandla ukuze ipuleti, isiqeshana, negenkle, iphrofayli, nokunye okunjalo ngumuntu cindezela bese isikhunta ukuze plastically deform noma ukwehlukanisa wanyathela ingxenye, kanjalo ukuthola workpiece we oyifunayo ukuma ngosayizi.
Kodwa izimo ezinhlanu ezilandelayo kumele kwenziwe:
1, ukucutshungulwa metal nginyathela izingxenye kufanele kube yinzuzo ukuba ukucutshungulwa imishini ekhona, inqubo imishini kanye nenqubo ngangokunokwenzeka.
2, insimbi nginyathela izingxenye kucutshungulwa esimweni ekuqinisekiseni ukusetshenziswa okwejwayelekile, zama ukwenza izidingo ukunemba ezingeni kanye ebusweni maholoholo ezingeni ntathu ephansi, futhi kusisiza ukuba umkhiqizo impambano, ukunciphisa imfucuza, futhi ukuqinisekisa izinga umkhiqizo nokuzinza.
3, insimbi nginyathela izingxenye lokucubungula kufanele kube elula isesimweni nokucabangela isakhiwo, ukuze lula isakhiwo isikhunta futhi lula inani izinqubo, okungukuthi, ukuqedela ukucutshungulwa nginyathela izingxenye ne okungenani kanye elula inqubo nginyathela, ukunciphisa ukucutshungulwa nge ezinye izindlela, futhi kuyazuzisa Shaya phasi ngelunyawo operation kusiza inhlangano imishini kanye ukukhiqizwa ezenzakalelayo ukwandisa zabasebenzi umkhiqizo.
4, metal nginyathela izingxenye kucutshungulwa kumele ihlangabezane ukusetshenziswa komkhiqizo kanye nokusebenza lobuchwepheshe, futhi kalula kungenziwa zesikole lalungiswa.
5, ukucutshungulwa metal nginyathela izingxenye kufanele kube kunikela ekuthuthukiseni ukusetshenziswa metal izinto, ukunciphisa ezihlukahlukene futhi Ukucaciswa materials, kanye nokwehlisa ukusetshenziswa kwezinto eziphinde ngangokunokwenzeka. Sebenzisa izinto eziphansi noma kuphi lapho kungenzeka, futhi lenze izingxenye njengoba khulula ngangokunokwenzeka futhi imfucuza kancane.
isikhathi Iposi: Jan-04-2019